Loza teny Soanierana Mpitondra scooter roa tena voa mafy
Mpitondra moto roa no niharan-doza tetsy Soanierana manakaiky ny Passiflore halina tokony ho tamin’ny 10 ora teo.
Raha ny fitantaran’ny olona teny an-toerana dia nisy scooter tazana nandeha mafy avy any Ankadimbahoaka, nidofotra avy hatrany tamina fiara 4x4. Mbola nisy scooter iray hafa indray saika hiakatra “trottoir”, nidona tamina fiara hafa izay nijanona teo amoron-dalana. Samy torana tsy nahatsiro tena ireo lehilahy roa nitondra scooter izay nianjera mafy tokoa. Nentina avy hatrany any amin’ny hopitaly Hjra moa izy ireo. Hita ho voa mafy ihany. Loza roa izany no nitranga tao anatin’ny 15 minitra teny Soanierana halina. Ny vaovao farany nangonina no nahafantarana fa samy miady amin’ny fahafatesana ireo roalahy. Mila fitandremana ny fifamoivoizana, indrindra rehefa amin’ny alina.
Nangonin’i Rivo TS